किशोर नेपाल, भाद्र २६, २०७६
अहिलेका लागि महानगरसँग जोडिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका पुग्नै मुस्किल छ । नगर प्रवेशमार्ग यति बिग्रिएको छ कि त्यसबाट पार पाउनु कठिन छ । चाबहिलदेखि बौद्ध हुँदै जोरपाटीको सीमा काटेर गोकर्णेश्वरमा छिर्नुस् अथवा गुह्येश्वरीबाट बाग्मती करिडोर समातेर गन्तव्यमा पुग्नुस् : सडकको गति उस्तै छ दुवैतिर । पुरा पढ्नुहोस्
क्षितिज समर्पण, जाजरकोटभाद्र २६, २०७६
वर्षाैंदेखि जतनले राखेको छ–सन्दुकमाउसले धेरै पछि थाहा पाएको हो–एक थान नागरिकता हुनु मात्रयो देशको नागरिक हुनु रहेनछ ! पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , भाद्र २६, २०७६
गायक आशिष सचिन गौतम र मेलिना राईको ‘एकान दुई कान मैदान’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । भद्रगोलका काकु अर्थात दीपक आचार्यको निर्देशन तथा गम्भिर विष्टको कोरियोग्राफी रहेको गीतमा गायक आशिषसँगै सरोज खनाल अभिनेत्री आँचल शर्मा, सरोज अधिकारी, आश्मा विश्वकर्मा, पवन माकुरीको अभिनय रहेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
चार वर्षदेखि मोडलिङमा सक्रिय रेविका गुरुङले प्रदर्शनरत चलचित्र ‘मारुनी’बाट अभिनयमा ‘डेब्यु’ गरेकी छिन् । यो चलचित्रमा उनले निर्वाह गरेको चरित्रबाट राम्रै प्रशंसा पाइरहेकी छिन् । रेबिकाले साप्ताहिकलाई आफ्ना बेस्ट फ्रेन्डहरूका बारेमा बताएकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
अहिलेसम्म लभर गर्लको इमेजमा रहेकी जान्हवी कपुर चाँडै फरक भूमिकामा देखिने भएकी छिन् । करण जौहरको धर्मा प्रोडक्ट तथा जी स्टुडियोले निर्माण गरेको वार मुभी गुन्जन सक्सेना : द कार्गिल गर्लमा जान्हवी कपुर पाइलटको भूमिकामा देखिन लागेकी हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
अहिले हाम्रो जीवनशैली धेरै नै तनावपूर्ण बन्न पुगेको छ । तीव्र तनाव लामो समय सम्म भोग्नुपर्दा महिनावारी रोकिन्छ । अति नै तनावमा हुँदा एड्रेनालिन अनि कर्टिसोल जस्ता हार्मोन निस्कन्छन्, जसले हामीलाई त्यस किसिमको परिस्थितिको सामना गर्न सघाउँछ । महिलाको सन्दर्भमा यस्ता हार्मोन अत्यधिक निस्कदा त्यसको प्रभाव महिला हार्मोनहरू इस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोनको उत्सर्जनमा नकारात्मक रूपमा पर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्र ‘तिङला पुजु’ को सुटिङ भइरहेको छ । ‘तिङला पुजु’को जसको अर्थ हुन्छ, मुटुको काँडा । नीमा लामाको निर्देशन रहेको यो चलचित्र हाल काठमाडौंको जोरपाटीमा सुटिङ भइरहेको छ । जोरपाटीपछि मकवानपुरको विभिन्न स्थानमा चलचित्र खिचिने नीमाले जानकारी दिए । पुरा पढ्नुहोस्
महेश काफ्लेको शब्द तथा सङ्गीत रहेको छ । गीतमा उदय राज पौडेलको संगीत संयोजन रहेको छ । गीतको म्यूजिक भिडियोमा अभिनेता नाजिर हुसेन, अभिनेत्री आँचल शर्मा र गायक महेश काफ्लेलाई फिचर गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौंमा मनाइने विविध जात्रामध्ये इन्द्रजात्रा पनि एक हो । रमाइलो र महत्वपूर्ण जात्रा मानिन्छ । इन्द्रजात्राको प्रमुख कार्य नै लिङ्गो (ध्वजा) स्थापना हो । १२ औँ देखि १८ औँ शताब्दीमा निर्मित थुप्रै मठमन्दिरले सजिएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र हाल सम्पदा क्षेत्रमा पर्दछ । पुरा पढ्नुहोस्
गत असार १६ गतेबाट फ्लोरमा गएको चलचित्र ‘आमा’को छायांकन सकिएको छ । चलचित्रका अधिकांश दृष्य पानीमा दिच्नु पर्ने थियो । प्रयाप्त वर्षा कुर्दाकुर्दै चलचित्र छायांकनको समय लामो लागेको चलचित्रका निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले बताएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
अनोज रोक्का, भाद्र २६, २०७६
नेपालको झन्डा बोकेर विदेशी भुमिमा दैडिरहेका हुन्छन् दिनानाथ बगाले । बाबा शिवप्रसाद र आमा मायादेबी बगालेको कोखबाट सन् १९७९ गोर्खामा जन्मेका दिनानाथ २००४ मा हङकङ आएपछि आजको दिनसम्म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै निरन्तर दौडिरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
पछिल्लो समय देशमा विभिन्न खाले अवार्डहरु हुने गरेका छन् । यहि मेसोमा राजधानीको राष्ट्रिय नाचघरमा बुधबार पहिलो ‘औद्योगिक शान्ति नेपाल म्युजिक अवार्ड’ सम्पन्न भयो । औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाले आयोजना गरेको अवार्डको पहिलो संस्करणमा गीतकार डा. डिआर उपाध्यायले सुगम संगीत तर्फ सर्वोत्कृष्ट गीतकारको अवार्ड उचाल्न सफल भए । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय टेलिभिजन रियालिटी शो ‘को बन्छ करोडपती’ का विजेता राजीब जैनलाई १ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ । आज बिहिबार जैनलाई एसआरविएन मिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विपिनकुमार आचार्य, कार्यक्रम प्रस्तोता अभिनेता राजेश हमाल, सिभिल बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ, क्रियटिम निर्देशक सुरक्षा अधिकारी लगायतले १ करोडको चेक हस्तान्तरण गरे । पुरा पढ्नुहोस्